Vitamin B17: ezigbo ọgwụgwọ iji gbochie ọrịa kansa - Afrikhepri Fondation
Mọnde, Ọgọst 3, 2020
Vitamin B17: ọgwụgwọ dị irè maka cancer
Le laetrile (vitamin B17) bụ ihe ana - eme na - eme glucoside sitere na mkpụrụ osisi aprịkọt nke a ma ama n'afọ ndị 1970. E mere nnyocha na ndị ọrịa 179 nwere ọrịa ara na ọnụọgụ ọnya ndị nwere ọgwụgwọ Laetrile. Dị ka ọ na-eme n'oge ahụ, ha na-enwetakwa vitamin na enzymes a na-egbu. Naanị otu onye ọrịa zuzuru oke maka mmeghachi omume ele mmadụ anya n'ihu na ọgwụgwọ, 90% nke isiokwu hụrụ ọganihu nke ọrịa n'ime ọnwa atọ. Nkezi afọ ha bụ naanị ọnwa asatọ na asatọ. Usoro ọgwụgwọ “ọzọ” megide ọrịa kansa. E gosiputaghi ha? O were ọtụtụ afọ, na eziokwu nke nnwale ahụike na-eme gburugburu ụwa, tupu e kwupụta usoro iji gosipụta uru Laetrile dị na mgbochi, yana n'ọgwọ ọrịa kansa. oge, aha "vitamin B3" natara. Hunzakuts na-eri ihe dị ka 4.8-17 ugboro B100 na nri ha karịa nkezi American, tumadi n'ihi iri mkpụrụ aprịkọt, yana ọtụtụ millet. , na Hunza. A na-atụle akụ na ụba mmadụ site na ọnụọgụ nke osisi aprịkọt ọ jidere, nri a na-achọsi ike bụ mkpụrụ na mkpụrụ nke aprịkọt, otu n'ime isi mmalite B200 dị n'elu ụwa. Ndị otu nleta ahụike achọtara ọrịa Hunzacuts na-enweghị ọrịa. Otu n'ime ndị otu ahụike izizi nyochara Hunza, bụ onye dibịa ama ama ama na Britain, Dr. Robert McCarrison duziri ya.
Odere na Journal AMA, site na January 7 1922, o kwuru, sị:
“Ndị Hunza amaghị ihe banyere ọrịa kansa.
Ha na-erite uru n'ọtụtụ owuwe ihe ubi nke aprịkọt.
Ha kpochapuru ha n'okpuru anyanwu, ma jiri ha na-eri nri ha.
Mana gịnị mere na ịnụbeghị banyere vitamin B17?
O yiri ka ọ dị mfe!
Ọ dị mma, eziokwu nke okwu ahụ bụ na cerlọ Ọrụ Ọrịa Cancer gbochiri ozi a ma nye iwu na iwu akwadoghị ire B17. Mafia Ahụike Ahụ agbaghaala mkpọsa “egwu”, dabere n'eziokwu ahụ bụ na vitamin B17 nwere cyanide “na-egbu egbu”. Ihe a abughi eziokwu.
Nnyocha ndị e mere gosiri na vitamin B17 adịghị emerụ ahụ anụ ahụ.
molikula B17 nke ọ bụla nwere otu hydrogen cyanide, otu mkpụrụ nke benzaldehyde yana nkeji glucose abụọ (sugar) na-emechi ọnụ. Ka hydrogen cyanide bụrụ ihe dị ize ndụ, ị ga-ebu ụzọ kpọghee mkpụrụ ndụ nke ga - ahapụ ya, aghụghọ nke nwere ike ime naanị enzyme nke ana - akpọ beta-glucosidase, nke a na - ahụ ebe niile na ahụ mmadụ. ọ bụ naanị na nkeji nkeji, mana n'aka nke ọzọ, n'ọtụtụ buru ibu n'otu ebe: mkpụrụ ndụ cancer.
Ya mere, hydrogen cyanide bu nke emechiri emechi na ebe oria cancer di, na nke a, enwere nsonaazụ na-agbanwe agbanwe, nke na-emebi kpam kpam maka mkpụrụ ndụ kansa, ebe ọ bụ na-emechighị mkpụrụ ndụ benzaldehyde n'otu oge. oge.
Mkpụrụ ndụ kansa nwere ọnụọgụ okpukpu abụọ, ma cyanide na benzaldeyhde! Benzaldehyde bụ nsí na-egbu egbu na ya onwe ya, mana mgbe ọ jikọrọ ọnụ na cyanide, nsonaazụ ya na-eme ka ọ bụrụ nari ugboro 100 karịa ka ọ na - arụ naanị ya.
A na-ekpochapụ mkpụrụ ndụ cancer ahụ kpam kpam!
Ma nke a ọ́ bụghị ihe dị mma maka akụkụ nke akụkụ ahụ ndị ọzọ? Enzyme ọzọ, rhodanese, na-enwekarị nnukwu ego buru ibu karịa beta-glucosidase na-emeghe enzyme na anụ ahụ dị mma, nwere ikike nke imebi ma cyanide na benzaldehyde (ihe adịghị emerụ ahụ, na salicylate (nke bụ ihe mgbu na-egbu mgbu aspirin). N'ụzọ na-akpali mmasị, mkpụrụ ndụ kansa ara adịghị arịa rhodanese ma ọlị, nke na-eme ka ha hapụ kpamkpam na nsị abụọ na-egbu egbu. A maara usoro a niile dị ka nhọta egbu egbu, ebe ọ bụ naanị mkpụrụ ndụ cancer ka ezubere iche ma mebie ya.
Otu narị otu narị ọmụmụ ihe ọmụmụ nke ọtụtụ ndị dibịa tozuru oke na-eme n'ụwa niile, gụnyere ndị Dr. Ernesto Contreras duziri n'ụlọ ọgwụ Oasis of Hope dị na Mexico, na-eme ka obi sie anyị ike na ọgwụgwọ ahụ na ọgwụgwọ B17 adịghị mma maka sel nkịtị.
Nke a bụ akụkọ ọjọọ maka Industrylọ Ọrụ Ọrịa Cancer. Mkpụrụ aprịkọt adịghị ọnụ ... n'ezie adịghị ọnụ ... ọ bụghị ọnụ ọnụ dị ka mmanya ọgwụ ikpeazụ ha nke ọgwụ ọgwụ.
Enyi m nwoke aha ya bụ Jason Vale natara ikpe ọnwụ n’aka ndị dọkịta n’etiti 1990s mgbe a chọpụtara na o nwere kansa “ọrịa” kansa. Ọ mụtara n'ọtụtụ nyocha na ndị mmadụ na-achọpụta ọrịa na-agwọ ọrịa mkpụrụ apụl na mkpụrụ aprịkọt, nke, dị ka m kwuru n’elu, nwere nnukwu ego nke vitamin B17.
Jason malitere inwe ahụ ike ozugbo, na-eri mkpụrụ apụl na olulu dị ka akụkụ nke nri ya kwa ụbọchị. N’oge na-adịghị anya, ọrịa kansa Jason akparịala n’ụzọ nkịtị. Mgbe a na-agbasa akụkọ akụkọ 'Jason' na televishọn mba n'etiti afọ 1990, nke a kpasuru ndị na-ege ntị
dị nnọọ ukwuu na otu akụkọ ahụ na-agbasa ozi nke ugboro abụọ, n'izu sochirinụ.
Obi ụtọ nke ndị na-ekiri ihe nkiri ahụ riri oke nke na Jason hụrụ onwe ya na-akpọ oku site na ekwentị site n'aka ndị bi na mba ahụ dum. N'ime afọ ole na ole sochirinụ, Jason nyeere ọtụtụ puku mmadụ aka ịgwọ ọrịa kansa n'ụzọ gara nke ọma site na-eri mkpụrụ osisi kricel.
Jason bụ onye arụrụ ọrụ ntụrụndụ "Gestapo", nke FDA kpebiri, a tụrụ ya mkpọrọ na June 18, 2004, n'ụlọ mkpọrọ ọnwa isii na atọ na afọ atọ nke onye nlekọta ụlọ ikpe steeti lekọtara ya. United na Eastern District nke New York. Nmebi ya? Ree osisi aprịkọt na webụsaịtị ha, ma gwa ndị mmadụ eziokwu NA Njirimara ọgwụgwọ ha. Nabata na "ala nnwere onwe na ala nna nke ndị nwere obi ike".
Mgbe o jesịrị ihe dị ka afọ anọ n'ụlọ mkpọrọ, a tọhapụrụ Jason na remand na mbido 2008.
AHỤ: Ọrịa cancer: akụkọ ihe mere eme nke vitamin B17, ọgwụgwọ anụ ahụ ma dị irè
Ụwa nke na-enweghị cancer, akụkọ nke vitamin B17
Akwụkwọ a nke 360 peeji nke dị iche iche nke ịbụ ihe siri ike ịsụgharị, ọ bụghị site na ọdịnaya nke asụsụ ma ọ bụ ọrụ aka ya, ọ bụghị, kama site n'inwe ihe kpatara oge, kpebiri ịsụgharị nanị nnukwu ihe ndị ọzọ, ọ na-esiri anyị ike ikwenye ma họrọ ihe kwesịrị ịhapụ nsụgharị, gịnị mere? Ebe ọ bụ na akwụkwọ ahụ bara ọgaranya na ọmụma site na nke mbụ ruo na peeji ikpeazụ na nke anyị ghọtara n'oge ọ na-agụrụ ya ihe mere na ọ dịghị mgbe a sụgharịrị ya n'asụsụ French (anya na-agbanye na mwepụ ọgwụ) mgbe were iwe na ọ bụghị. Ebe ọ bụ na ugbu a 38 afọ gara aga na ọ dị adị, anyị nwere ike iche n'echiche ziri ezi na ọ nweghị ụlọ obibi akwụkwọ chọrọ ịnweta ihe ize ndụ nke ibipụta ya na French na-adabere na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ọgwụ karịa sayensị, a dị ka ọrụ nke dọkịta dọkịta French bụ Dr. Gernez, e tinyere ya na kọlọtọ maka otu ihe kpatara ya.
Akwụkwọ ahụ na-ewetara anyị, site na nchọpụta na ihe akaebe, iji chepụta ụzọ ọzọ maka cancer,
ọrịa a zuru ụwa ọnụ, nke na-emetụta ọtụtụ ihe ndị ọzọ a na-akpọ ụwa mepere anya. Otu uzo nke di n'ime ihe ndi a na-akpo ya bu ihe ndi ozo, nke bu ihe ndi ogwu nke na-acho oria uwa, na-eme agha aghaghi obi.
Ọdịdị a na-ahụ maka ọrịa ahụ chọrọ ịgwọ ya na isi iyi ya ma ghara ịgwọ nanị ihe ịrịba ama na mgbaàmà dịka ọ dị ka ọ na-eme "nkà mmụta ọgwụ" allopathic "na ọtụtụ ọrịa nke kansa bụ nanị atụ.
Usoro ọgwụgwọ Allopathic na-agwọ ọrịa cancer dị ka ọrịa, nkà mmụta ọgwụ na-agwọ ọrịa ahụ na isi iyi ya:
akpọrọ bụ nanị ihe mgbaàmà nke ọrịa ahụ. Ka anyị na-agụ banyere isiokwu ahụ, anyị ghọtara na igbochi ọrịa cancer na ọgwụgwọ nwere ike ime n'ọtụtụ ụzọ, ọ dịghị nsogbu ọ bụla siri ike, ma usoro ọgwụgwọ niile, gụnyere nke na-eji Laetrile ma ọ bụ ihe nitriloside nke a maara dịka amygdalin n'ụdị ọdịdị ya dị n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 1200 na-eri osisi na mkpụrụ,
cheta na ọrịa cancer bụ ọrịa na-adịghị ala ala (na-adịghị ala ala n'ihi na ọ naghị agwọ onwe ya ma na-adịgide, metabolic n'ihi na ọ na-apụta n'ime ahụ, ọ bụghịkwa ndị ọzọ).
"Enweghị ọgwụ na-egosi na ọ dịghị ọgwụ ndị na-arịa ọrịa na-adịghị ala ala nke ọgwụgwọ ma ọ bụ ihe ntinye aka na-agwọ ahụ (ịwa ahụ) mere ka ọ dị ike" dị ka Dr. Krebs (biochemist, developer of Laetrile) si kwuo, na nke ọ bụla, a chọpụtara ngwọta kwesịrị ekwesị n'ime mkpebi nke ihe oriri na-edozi ahụ na ndị ahụ emetụtala (dịka ihe atụ, ma ọ bụ pellagra, dịka ọmụmaatụ, nke na-ezighi ezi na vitamin C na B3).
"Ịdọ aka ná ntị, Laetrile bụ eze na-agwọ ọrịa maka ọrịa kansa.
Onye edemede nke akwụkwọ a bụ onye na-eme nchọpụta na onye edemede, ọ bụghị dọkịta. Eziokwu ndị akọwapụtara na ibe ndị a bụ maka ozi naanị ma ọ bụghị ndụmọdụ ahụike.
Ihe mgbaru ọsọ ha bụ ịmepụta ihe ndabere maka nkwenye mara ya. Ọ bụ ezie na e nwere ihe nwere ike ime na ebe mgbochi, ọgwụgwọ ọgwụ ọ bụghị naanị ọrịa cancer ka a ga-eme.
Nlekọta nke usoro ọgwụgwọ ọ bụla na-egbochi kansa, tinyere ọgwụgwọ ọrịa, kwesịrị ịrụ ọrụ n'okpuru nlekọta nke ndị ọkachamara ahụike ọkachamara n'ọhịa ha. "
Ụwa nke na-enweghị cancer (nnukwu ihe odide) Akụkọ banyere Vitamin B17 (Laetrile)
Site na G. Edward Griffin (1997, 2th Edition, 13th 1998 Reprint)
Withoutwa Na-enweghị Ọrịa
23,12€ dị na ngwaahịa
1 ọhụrụ site na 23,12 €
Ejiri 1 € 20,85 mee ihe
Zụta € 23,12
ka Ọgọst 2, 2020 8:10
Ụbọchị mwepụta 2018-01-01T00:00:01Z
Publication Ụbọchị 2018-01-01T00:00:01Z
Hapụ echiche gị
I meghachiri"Vitamin B17: ngwọta dị irè megide ọrịa kansa" Sekọnd ole na ole gara aga
Natnye bụ Nat Turner, ohu bụ onye dugara mgbanwe na United States na 1831?
Afrikhepri Foundation sur Aha akwukwo mara mma maka umu anyi na ihe ha bu: "Biko mezue ndepụta nke aha Africa" Jul 30, 11:08
Afrikhepri Foundation sur Mmalite nke okwu Afrika: "Anyị abụghị ndị Africa kama anyị bụ ndị Kamites." Jul 30, 09:49
Afrikhepri Foundation sur Sachapụ ụlọ gị: Mwepu nke ike na-adịghị mma: "Otu esi ekpocha ulo gi ma wepu ume ojoo." Jul 30, 09:43
M ga-ahụ echiche gị n'anya, biko kwuox